Sezulu eGeorgia. Ubudlelwano sezulu ebesingesihle laseGeorgia
Georgia - ezweni ise entshonalanga esifundeni Transcaucasian. Izwe welula kanye iziNtaba zaseCaucasus futhi izungezwe Russia empumalanga enyakatho, nge Turkey kanye Armenia eningizimu eningizimu-mpumalanga - ne-Azerbaijan. On the nangasentshonalanga oLwandle Olumnyama.
Northern Territory uhulumeni matasa Greater eCaucasus uhlelo entabeni, lapho izintaba ize ilingane 4500-5000 amamitha ngaphezu kolwandle. Indawo ephakeme kakhulu ngesikhathi 5068 amamitha futhi ubizwa ngokuthi ezingeni Shkhara. izindawo East ukugadlwa ukuzamazama komhlaba eziyingozi, ukuzamazama komhlaba safinyelela amaphuzu 5-7.
ENingizimu yezwe imbozwe amabanga ayo phakathi Lesser eCaucasus (ukuphakama - up 2800 m). Phakathi Omkhulu kanye eCaucasus Lesser kuyinto Colchis Eliphansi, okuyinto ufana unxantathu.
Empumalanga, umfula Kura. Nansi Inveriyskaya ukucindezeleka.
Georgia itholakala ikakhulukazi sezulu nakwezifudumele. Futhi kuphela empumalanga, engena a ngokulinganisela. IziNtaba zaseCaucasus bafeza indima ebaluleke kakhulu ekulolongeni sezulu eGeorgia. Siyabonga kubo, ngisho ezindaweni ezikude kakhulu zaleli zwe kakhulu ukuthonya Black Sea emoyeni uquqaba. Ziyakwazi isithiyo enamandla uquqaba abandayo enyakatho. Basuke ixubene komoya efudumele ivela Black ulwandle. sezulu Impumuzo Georgia sika ezihlobene kakhulu. On insimu yezwe ufudumele kuka kwezinye izifunda, okuyizinto endaweni ekuyi-latitude efanayo.
sezulu eGeorgia ehlukahlukene ukuze izivakashi izinsuku 2-3 nje ungakwazi ukubuka wonke ezine zonyaka. Sihlanganisa izihlahla ezihlale ziluhlaza ogwini Sea, intokazi, esanda ngesibhakela utshani kanye entwasahlobo izimbali elaliphansi kwamagquma inkungu nge imvula neqhwa ezintabeni, futhi ekugcineni, ngokujulile eneqhwa entabeni yeziqongo.
sezulu yanyanga zonke eGeorgia
Winter eGeorgia ngempela efudumele, kodwa ilanga ivelakancane. Isizini izivakashi kolwandle ivaliwe kuphela ezintabeni eziningi izivakashi abafuna uphumule ski resort of eCaucasus Mountains. Baningi impela abantu, kodwa kuzo zonke ngamakheshi akwakhelwa.
Uma unquma ukuya Georgia ebusika, bese ukhetha ngokucophelela ehhotela, I-central Ukushisa ayitholakali.
Spring - the ezingalindelekile kakhulu, kodwa ngesikhathi esifanayo, isikhathi esihle ukuya. Esikhathini lokushisa Engxenyeni yokuqala kuyahlukahluka ongayilindele. Ungaqhubeka bahambe jacket ebusika phansi, bobabili ezintabeni kungenzeka futhi izingubo nge imikhono iDemo. Ngasekuqaleni kuka-May izinga lokushisa likhuphuka ukuba 25-27 degrees, futhi inani lezinsuku Licwathile luyanda kakhulu.
Ehlobo ukugeza isizini liyavuleka. NEKUKHULUMA maphakathi no-ehlobo. Izivakashi eziningi ukuchitha amaholide abo ogwini ngenxa yokushisa okukhulu. Ngokuvamile izinga lokushisa likhuphuka degrees 30 futhi izinga lokushisa kwamanzi - up 25. Ngisho ezintabeni lokushisa air ngokuvamile unqobe uphawu degrees 25. Uma ayethanda imisebenzi yangaphandle, kutuswa ukuba uvakashele Georgia ekuqaleni kuka June.
Autumn e Georgia - Ngalesi sikhathi, izithelo kanye amajikijolo. Izimakethe zigcwele amagilebhisi, amakhabe, amakhabe, Mandarin amawolintshi, hazelnuts, okuyizinto wonke nje ngokuchichimayo. Izinyanga kangcono ukuhlala ukhululekile ogwini kucatshangwa September nango-October. Ngalesi sikhathi, ungazizwa ukushisa likhinyabeze emgwaqweni (mayelana 25 degrees lokushisa). Futhi ezintabeni iyona ukushaywa ethandwa kakhulu ezinyangeni ezizayo.
Amaholide e Georgia
Okokuqala, Georgia - leli yizwe benomoya wokungenisa izivakashi. Awunayo isikhathi ukubheka emuva, njengoba kakade wathela Chacha futhi agqoke khachapuri ipuleti, kuyilapho ethi a ubhontshisi empilweni yakho eside. Ukwenqaba aphathe kungamukelwa. Umcebo eyinhloko Georgia - hhayi ezintabeni, hhayi olwandle, nabantu - ngobuqotho futhi evulekile.
Kwezinye izindawo kufana Barcelona izindawo - Italy, futhi kwezinye izindawo ngokuvamile okufana kakhulu eNingizimu yeFrance. Amazing nemvelo, izintaba, abantu nabanomusa futhi enobungane - konke lokhu kwenza Georgia ezikhangayo ngasiphi isikhathi sonyaka.
Amadoda Italian izingubo: brand ezikufanelekelayo ukunakwa